XAMARJI WAXAA LOO YAQAAN NINKA UGU ABAALKA DARRAN!!! FADLAN AKHRI QISADAN | Maalmahanews
XAMARJI WAXAA LOO YAQAAN NINKA UGU ABAALKA DARRAN!!! FADLAN AKHRI QISADAN
February 23, 2016 - Written by admin
Intiina taqaan uma baahnidin tafaasiil oo mawduuca ayaa idiinku filan, waxaan se rabaa in badan oo bolshada uu maalin walba beenta la horjoogo inaan u bayaamiyo.
Xamarji kolkuu dalka la soo galay isagoo dayday ah oo qoro ku macaash ah ayuu maqaaxi soo galay wiilkii dalabka hayey ayaa raashinkii kala raagay intuu qorigii cabaystay ayuu xalkii ku dilay. Waa la qabtay oo geed ayaa lagu xidhay si loo toogto. Mujaahid Muuse Biixi ayaa intuu soo cararay raggan yidhi xadhiga ka fura isna Xamarji oo oohin iyo duuf ka dhammaaday is hor dhigay, oo yidhi aniga I toogta.
Ninka sidaas kuu gala maxaa abaal u ah een ahyn inaad naftaada u bixiso. Maantana af xumo iyo colaad ayuu meel walba ula joogaa. Ma xusuusataa xadhigiisii raashinka isagoo badhasaab ah, yaa ka hawl galay sii deyn tiisaa waa ninkii horeyba naftiisa u furtay oo u arkaayey inuu yahay wiilkiisa.
Xamarji kolkii kal hore uu ka baxaayey KULMIYE waxuu ku af gobaadsaday Muuse waa la xumeeyey oo dartii ayaan uga baxayaa. Ninkii uu dartii uga baxay oo manta hantiyey guusha murashaxnimo, ayuu bilaabay caydiisa halkuu ka soo noqon lahaa.
Waa abaal laawe number kow oon cidi labayn. Waa beenaale oo Boorame waxuu shalay ammaan kula dul dhacay been ah Madaxweyne Daahir Riyaale oo aynu ogayn halka uu Xamarji ka joogay. Waxuuma cay kula habsady Muuse Biixi iyo Xisbigii Kulmiye ee uu dhowr iyo tobanka sano ka midka ahaa xilalna ka soo qabtay waxaa la yaab leh uu la hadlayaa. Hargeysa waa laga yaqaan ee beenta ha la wareego darafyada Soomaliland iyana wey baran.
Yuu wataa oon ahyn afkiisa. Xisbiga WADANI waxa astaan u ah jirjiroolayaasha uu manaasibta u dhiibay oo ummaadda aan u soo jiidi karayn. Mey qaateen hadday cid kale hayaan. Waxay ku tusaysaa sida ay u madhan yjhiin. Haddii WADDANI ku faanaayo inuu Daahir Riyaale dhabta ku hayey miyey iloobeen in bulshadu tuurtay Daahir oo Madaxweyne ah lagag helay in ka badan 100,000 cod kolka uu isagu ku helay 80 cod. Kolkay leeyihiin ammaan ayuu muadan yahay Daahir inuu xilka wareejiyo, waa maxay macnaheedu. Miyaan doorashu dhicin, maxaynu doorashda u smaeynaa haddan ninka laga badiyaa dhiibeyn. Maxaa se beenta loo sheegayaa ee u leedihiin waa Madaxweyne u horeeyey ee doorasho lagaga guuleysatay xilka wareejiya. Waa taariikhda Afrika 15 Madaxweyne ayaa xilka wareejiyey Daahir hortiis, ninka uGu horeyaan ahaa Madaxweyni Soomaliya Aadan Cabdulle Cismaan. Halkan ka akhrista oo beenta Xamarji ma bedeleyso taariikhda. Daahir amaanta uu leeyahay waa inuu doorashooyin qabtay oo ah arrin taariikhda u gashay, waana nin aan mucaaridnimo kala hor iman qaranka. Waa ammaan uu leeyahay cidina ka qaadayn. Waa nin ixtiraam iyo maamus qaranka ku leh. Waana nin garanaaya Xamarji ammaantiisu inay ntahay hawo kulul.
ABAAL LAAWE NINKA QAATAY ISAGAA QUUMAMAYN.